बेला-बेला गर्भाशयमा जलन भएको महशुस हुन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो खतरा – Sandesh Press
August 18, 2021 220
काठमाडौँ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर क्रमशः विस्तारै विस्तारै बढ्ने भएकाले कतिपयले यसको सुरुवाती लक्षण थाहा पाउँदैनन्। जब समस्या गंभिर बन्छ, तबमात्र यो क्यान्सर फैलिएको थाहा हुन्छ।
यदि सुरुवाती चरणमै यसको लक्षण थाहा भयो भने उपचार संभव र सहज हुन्छ। त्यसैले शरीरमा देखिने केही यस्ता संकेतपछि सर्तक हुनुपर्छ।
असामान्य रक्तस्रावः सामान्यत पाठेघरको मुखको क्यान्सर ३५ देखि ४० बर्षको उमेरपछि हुनेगर्छ । यद्यपि यसको संकेतबाट रोग पहिचान गर्न सकिन्छ ।
यदि शारीरिक सम्बन्ध र रजनोवृत्तिपछि पनि धेरै रक्तश्राव भयो, प्रजनन अंगमा दुखाई महसुष भयो भने यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हो । यस्तो स्थितीमा तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिन आवश्यक छ ।
वाइट डिस्चार्ज हुनुः अक्सर महिलाले वाइट डिस्चार्ज जस्ता समस्यालाई आम समस्या मानेर नजरअन्दाज गर्छन्, जो पछि गएर निकै खतरनाक सावित हुनसक्छ । यस्तो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन किनभने यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ ।
कोखको पीडाः मासिक धर्ममा सामान्यत महिलाको कोखमा दुखाई अनुभव हुँदैन । तर, अचानक हल्का वा तिब्र दुखाई महसुष हुन थालेमा त्यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ। यस्तो स्थितीमा तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ।
पिसाबमा पीडाः यदि पाठेघरको लक्षणलाई नजर अन्दाज गरियो भने यो क्यान्सर यतिसम्म बढ्न पुग्छ कि त्यसले पिसाबको थैलीसम्म पुग्न सक्छ । यसले गर्दा पिसाब फेर्दा कठिनाई हुन्छ । यस्तो स्थितीमा पनि तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ।
गुप्ताङमा जलनः मासिक स्रावका क्रमममा वा सम्बन्ध बनाइरहेको बेला रक्तश्राव हुनु वा अचानक गर्भाशयमा जलन हुनु पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हो । यस्तो लक्षणलाई नजरअन्दाज नगरौं।
Prevशत्रुले पनि झुक्याउन सक्दैनन् यी ५ राशिका व्यक्तिलाई, हुन्छन् निकै चलाख र वुद्धिमान
सागमा स्वर्ण विजेता सञ्जु ललितपुरमा मृ’त फेला